स्वादिष्ट बफेट - आफ्नो सपना? कुटपिट मा sausages - धेरै Gourmets एक मनपर्ने पकवान। निस्सन्देह, सबै को पहिलो, तिनीहरूले स्वाद आकर्षित छन्। तथापि, एउटा महत्त्वपूर्ण घटक पाक को सजिलो छ। यो पकवान सजिलै आफ्नो मुकुट बन्न सक्छ। त्यसैले, तपाईं मा sausages सेवा गर्ने निर्णय भने कुटपिट नुस्खा , हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ। मासु खरीद गर्न प्रयोग गरिन्छ धेरै मानिसहरू तर, सधैं ताजा हुन प्रत्याभूति छैन, पसलहरू र obschepitovskih अंक मा एक विनम्रता छ। त्यहाँ द्वारा तपाईं आफैलाई गरे केही थप स्वादिष्ट व्यञ्जन छ। साथै, यो मामला मा तपाईं उत्पादन गुणस्तर र ताजगी बारेमा तिनीहरूले भन्न रूपमा जानकारी हुनेछ, पहिलो हात। त्यसैले, हरेक महिला कसरी कुटपिट मा sausages पकाउन थाहा हुनुपर्छ। अनुपात द्वारा आफैलाई गणना - तपाईं थप पकाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने सामाग्री को संख्या,6सर्विंग्स लागि डिजाइन। सुरू गरौं:
कुटपिट मा ससेज बनाउन, तपाईंलाई आवश्यक: मरिच (जमीन), अन्डा -2टुक्रा, आलु - पाउन्ड,2वफल सर्टकेक,6sausages, यो राम्रो दूध छ, तर विकल्प neprintsipialen, घिउ - 50 ग्राम, वनस्पति तेल, नुन स्वाद, तरकारी को चिम्टी।
सबै को पहिलो आलु को सफाई उतरदायित्व लिनु। मेरो तरकारी ध्यान। सूक्ष्मता कटा र जोश गर्न राखे। पहिले हामी पानी नुन। एक पटक आलु पकाएको छन्, Mash। यो मिश्रण मा थप्न घिउ, अन्डा र वर्दी सम्म मिश्रण। तपाईं के चाहनुहुन्छ, तर तातो सस रहन कडा परिश्रम। तापमान एक preheated puree मा राख्दै कायम गर्न सकिन्छ, तर ओवन बन्द, वा समय समयमा तौलिया पैन लपेटन वा वार्मिंग द्वारा। यसलाई प्रयोग गर्न प्रयास - सायद तपाईं इच्छित तापमान कायम राख्न आफ्नो मार्गमा छ।
Sausages एक र दोस्रो किनारा देखि एक चीरा बनाउन छ। वेफर बिस्कुट सानो स्ट्रिप्स, चौडाइ मा sausages को आकार भन्दा अलि कम कटौती गर्नुपर्छ, र बारेमा दुई पटक लामो।
एउटा सानो कचौरा मा दोस्रो बिट अन्डा। नुन र मरिच, तरकारी थप्नुहोस्। प्रत्येक वेफर पट्टी गर्म सस चिकनाना आवश्यक - यो हामीलाई यो इच्छित आकार पछि दिन मदत गर्नेछ भन्ने वेफर softens।
को पट्टी वेफर्स नरम पछि, ससेज माथि राखे। यसलाई कस को वेफर पाना र्याप गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यसपछि, प्रत्येक जस्तै "रोल" पीठो मा नुन र मरिच र रोल संग अन्डा मा डिप गर्न।
पैन मा कुटपिट मा sausages तलना। ओवन मा पकाना उत्पादन को भेद, तर यो मामला मा, एक पाप्रो तल फारम सक्छ। एक कराइ मा, तपाईं फ्लिप निरन्तर ससेज र पर्याप्त तेल खन्याउन भने, कुटपिट मा sausages समान रूप ज्य़ादा टोस्ट। प्रयोग तिनीहरूलाई तातो गर्न आवश्यक छ।
यो पकवान को तयारी को अर्को संस्करण हो। उहाँले पनि सजिलो अघिल्लो, नास्ता वा एक खाजा लागि पूर्ण। दूध, पीठो, पनीर, अन्डा, ससेज, सूर्यमुखी तेल, नुन: यो नुस्खा लागि कुटपिट मा sausages उत्पादनहरु को निम्न सूचीबाट तयार छन्। यी उत्पादनहरु हरेक रेफ्रिजरेटर छन्।
फलस्वरूप, हामी एउटा सानो "बर्गर" प्राप्त गर्नुहोस्। पहिलो, ससेज crosswise आधा कटौती। त्यसपछि प्रत्येक आधा साथ एक चीरा। दूध, अन्डा, नुन, whisk परिणामस्वरूप ठूलो मिश्रण। त्यसपछि पनीर RUB र आम थप्न, एक सानो पीठो खन्याउन।
पनीर ध्यान: यो धेरै नूनिलो छ भने, तपाईं नुन सावधान रहनुहोस् हुन आवश्यक छ यसलाई ज्यादा छैन। , निरन्तर गर्नाले आटा र भुट्नु मा - त्यसपछि, प्रत्येक ससेज यो मिश्रण मा, डूबा त्यसपछि। राम्रो स्वाद तपाईं खैरो सम्म तिनीहरूलाई तलना यदि हुनेछ।
बीस मिनेट - पहिलो पकवान एक घण्टा र दोस्रो अधिक आधा भन्दा कुनै लिन्छ तयार। र कुटपिट यी sausages साँच्चै स्वादिष्ट। तिनीहरूले कुनै अपील गर्नेछ। यी सरल व्यञ्जनहरु आफ्नो जीवन nicer र उज्जवल बनाउन हुनेछ! जीवनको एक स्वाद आनन्द लिनुहोस्! फ्रान्सेली भन्नु, बोन भोक रूपमा!
उत्कृष्ट संयोजन: रातो माछा, रातो कावीयार। रातो माछा र कावीयार रिसेपी सलाद
Amore होटल Apts3* (साइप्रस / Protaras): होटल को वर्णन, मूल्यांकन
आफ्नो हात संग धातु स्तम्भहरु मा काठ बार: डिजाइन विशेषताहरु
Seams बिना छत टाइल के हो